Tsipy kanetibe – «Mada doublette mixte»: ho any Espaina ny ekipa ho tompondaka | NewsMada
Tsipy kanetibe – «Mada doublette mixte»: ho any Espaina ny ekipa ho tompondaka
Na mbola ao anaty ady mangatsiaka aza, amin’izao fotoana izao, ny federasiona malagasin’ny tsipy kanetibe (FMP) sy ireo ligim-paritra, mizotra ihany ny fifaninanam-pirenena, ho an’ny taom-pilalaovana 2019.
Hisy ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, ho an’olon-droa miaraka lahy sy vavy «doublette mixte». Hanana ny lanjany goavana io fihaonana io satria handeha hiatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, hatao any Espaina, ny ekipa ho tompondaka, amin’izany. Hisy dingana roa ity fifaninanam-pirenena ity ka ny 26 sy ny 27 janoary ny voalohany raha 16 sy 17 febroary kosa ny faharoa. Hiatrika ny famaranana lehibe, hatao ny 9 sy ny 10 marsa, ireo ekipa 8 voalohany isaky ny dingana.
Araka ny fantatra, hotontosaina eo amin’ny kianja CBT sy ny Paddock Mahamasina avokoa ireo fihaonana rehetra ireo. Takina amin’ireo mpilalao rehetra handray anjara, ny kara-pilalaovana voasonian’ny federasiona.
Marihina fa hatao ny 2 ka hatramin’ny 5 may 2019, ao amin’ny kianja Almerimar (El Ejido), Espaina, ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ka olon-tokana sy olon-droa ary olon-droa lahy sy vavy miaraka, no hifanintsanana, amin’izany.
Mandra-pahatonga izany, tontosa ny asabotsy 22 sy ny alahady 23 desambra lasa teo, teny Ankatso, ny «Grand open », nokarakarain’ny klioba Bic Ambohimahasoa. Nahatratra, 104 ny teo amin’ny sokajy «sénior» raha 36 ny an’ny sokajy vehivavy ary 46 ny «vétéran». Nandrombaka ny fandresena teo amin’ny «sénior», ny ekipan-dRadoko sy i Mamy Patrick ary i James (Bond), nandavo ny ekipan’i Fy sy i Bolo, tamin’ny isa, 13 no ho 7. Nandresy teo amin’ny vehivavy kosa i Cicine sy i Hasina, nanilika an’i Malala sy i Mialy (Bic) ary i Nanah sy i Ndrema no nandrombaka ny amboara, ho an’ny «vétéran», rehefa nandavo an’i Yves Michel sy i Sola (Jirama).